सर्वोच्चले भन्यो– ‘अभिनेत्री शिल्पालाई भदौ १५ गतेसम्म पक्राउ नगर्नु’
काठमाडौं । अभिनेत्री शिल्पा पोखरेललाई सर्वोच्च अदालतले तत्काल नपक्रन अन्तरिम आदेश दिएको छ । बहुविवाह सम्बन्धी जाहेरीका आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनबाट प्रहरीलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो । विस्तृतमा
‘मैले रेल स्टेशनमा धेरै स्त्रीहरुसँग माया लगाएको छु’ : शाहरुख खान
जोनको ‘बाट्ला हाउस’ ले १० औं दिनमा कति कमायो ?
कसको प्रेममा छिन् भूमी पेड्नेकर ?
अभिनेत्री सोनमलाई आयोडिनको कमी !
काजल र अजयको सम्बन्ध लामो समय नटिक्ने धेरैले अनुमान गरेका थिए
बलिउड कलाकारहरु जसले सबैको सामु श्रीमतीको थप्पड खाए
सुनिता अधिकारीको मौलिक गीत ‘लुरुरु हुरुरु’ बजारमा
काठमाडौँ । गायिक सुनिता अधिकारीले दर्शक, श्रोताका लागि अर्काे मीठो कोशेली लिएर आएकी छन् । यसअघि पानको मिसि लगायतका गीतबाट चर्चा बटुलेकी उनले ०७६ सालको सुरुमै मौलिक र उत्कृष्ट गीत ‘लुरुरु हुरुरु’ बजारमा ल्याएकी हुन् ।
‘खलनायक–२’ बनाउँदै रोज राणा
काठमाडौं । केही वर्षयता सुपरहिट फिल्मको सिक्वेल बनाउने निर्माताहरु ह्वात्तै बढेका छन् । यसै क्रममा रोज राणाले पनि मल्टीस्टारर् फिल्म ‘खलनायक’ को सिक्वेल निर्माणको घोषणा गरेका छन् ।
राज्यले गरेको विभेदमाथिको कथामा ‘भूइँफूल’ बन्ने
काठमाडौं । विशेषगरी दलित समुदायमा हुने उतारचढाव तथा राज्यले गरेको विभेदमाथिको कथामा फिल्म ‘भूइँफूल’ बन्ने भएको छ । आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘भूईफूल’ निर्माणको घोषणा सँगै शुभ मुहूर्त गरिएको छ । फिल्मलाई नेत्र छन्त्यालले निर्देशन गर्दैछन् ।